काठमाडौं, २७ चैत ।आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत विभिन्न ५ खेलका प्रतिस्पर्धा आज बुधवारदेखि शुरु हुँदैछ । दाङको घोराही कभर्डहलमा टेबलटेनिस, कपिलवस्तुको जितपुरस्थित सिद्धार्थ क्याम्पसमा कुस्ती, नेपालगन्जको मंगलप्रसाद उमाविमा पुरुष हक्की, ललितपुरको सातदोबाटोमा स्क्वास र बुटवलमा लनटेनिस हुनेछन् । महिला हक्की भने नेपालगन्जको खजुरास्थित शुक्र माविमा चैत ३० गतेदेखि मात्र शुरु हुनेछ । आठौँ राष्ट्रियको औपचारिक उद्घाटन […]
काठमाडौँ, १५ चैत । प्रदेश नं ५ मा आयोजना हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकूदमा विभिन्न खेलमा २४ गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) खेलाडीले सहभागिता जनाउने भएका छन् । गैरआवसीय नेपाली सङ्घका अनुसार विभिन्न सात मुलुकबाट नौ खेलमा २४ खेलाडीले सहभागिता जनाउने छन् । सङ्घका अनुसार अमेरिका, संयुक्त अबर इमिरेट्स (युएई), मलेशिया, अष्ट्रेलिया, मकाउ, जापान र हङकङ गरी […]
सावधान ! ज्यानमारा बन्यो PUBG, ४५ दिन खेल्दा गयो युवकको ज्यान
काठमाडौं, १३ चैत । युवा र विद्यार्थीहरुबीच लोकप्रीय बन्दै गएको ‘पबजी’ खेल अन्ततः ‘ज्यानमारा गेम’को रुपमा परिणत भएको छ । भारतमा लगातार ४५ दिन ‘PUBG’ खेल खेल्दा एक युवकको ज्यान गएको छ । भारतको तेलंगाना राज्यका जगतियाल शहरका २० वर्षीय एक युवकको लगातार पबजी खेल्दा ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । रिपोर्ट अनुसार […]
–भेषराज बस्नेत रासस, ९ चैत – प्रदेश नं ५ मा आयोजना हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताको मिति औपचारिक रूपमा घोषणा नभए पनि खेल हुने स्थानको टुङ्गो लागेको छ । प्रतियोगितामा समावेश कूल ३८ खेलमध्ये १५ विधाका खेल बाँकेमा हुने मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकूद विकास समिति प्रदेश नं ५ का अध्यक्ष भीम ओलीले जानकारी दिनुभयो । ओलीका […]
रंगशाला निर्माणमा खटएिका धुर्मुसले भने– दुई वर्षमा मेरो धोको पुरा हुन्छ
चितवन, २१ फागुन फागुन महिना, गर्मी ह्वात्तै पलाउने बेला हो तर पनि मौसम चिसो नै छ । चिसो मौसमको गोधुली साँझमा भरतपुरमा भेटिए सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ । मेलापात गरेर फर्कदै गरेका खेतालाजस्ता निकै थकानमा देखिन्थे उनी । यस्तो थकान उनलाई यतिबेला मात्र होइन, गिरानचौरको ढलेको बस्ती उठाउँदा र मुसहर बस्ती ठडाउँदा पनि भएको थियो । […]
काठमाडौँ, १२ फागुन- नेपाली महिलाले क्रिकेटको विश्वकपमा भाग लिने सम्भावना कहिले र कति होला ? यो प्रश्नको जवाफको लागि अब धेरै कुर्नुपर्ने देखिएको छैन । त्यसैको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) महिला विश्वकप क्रिकेटको एशिया छनोट प्रतियागिता अन्तर्गत आज नेपालले हङकङ विरुद्व खेल खेल्दैछ । नेपाली टिमले खेलमा टस हारेर पहिले फिल्डिङको निम्तो पाएको छ […]
मेस्सीको ५० औं ह्याट्रिक, बार्सिलोनाको विजयमा चम्कीए मेस्सी
काठमाडौं, १२ फागुन – फुटबल सुपर स्टार लियोनल मेस्सीले ५० औं ह्याट्रिक गरेका छन् । मेस्सीको ह्याट्रिकमा बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा सेभिल्लालाई ४–२ ले पराजित गरेको छ । मेस्सीले टोलीका लागि खेलको २६, ६७ तथा ८५ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। स्वारेजले भने अतिरिक्त समयको तेश्रो मिनेटमा टोलीलाई चौथो गोल […]
सन्दीपकाे दमदार खेलपछि मेलबर्न स्टार्स सेमिफाइनलमा
काठमाडौं, २७ माघ । अष्ट्रेलियामा जारी बिग ब्यास लिगको अन्तिम खेलमा नेपाली युवा खेलाडि सन्दीपको जोडदार प्रस्तुतिले मेलबर्न स्टार्स सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ । सिड्नी सिक्सर्सलाई ९४ रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै मेलबर्न स्टार्स सेमिफाइनलमा पुगेको हो । स्टार्सको फराकिलो जित निकाल्ने क्रममा नेपाली युवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले ११ रन खर्चिएर ३ विकेट लिएका […]
अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा सहयोग गर्न पारस सड्काको अपील (भिडियाेसहित)
काठमाडौं, २३ माघ । नेपाली त्रिकेट खेलाडीका कप्तान पारस खड्काले चितवनमा बन्न लागेको अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा सहयोग गर्न सबैलाई अपील गरेका छन् । एक दिवसीय र टी(ट्वान्टी अन्तराष्ट्रिय सिरिज जितेर फर्किएका नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले बन्न लागेको गौतम बुद्ध स्टेडियमको निर्माणको प्रशंसा गर्दै खेलाडीहरु अत्यन्त खुशी भएको बताएका छन् । कप्तान पारस […]
टी-२० श्रृंखला विजेता नेपाली क्रिकेट टोली नेपाल फर्किँदै
काठमाडौं । युएइ विरुद्धको एकदिवसीय र टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृङ्खला जितेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सोमबार दिउँसो स्वदेश फर्कंदै छ। दुईवटा ऐतिहासिक शृंखला विजेता नेपाली टोली अपराह्न तीन बजे नेपाल आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको नेपाली राष्ट्रिय टोलीका व्यवस्थापक रमन शिवाकोटीले जानकारी दिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्ले लगत्तै नेपाली टोलीलाई भव्य स्वागतको तयारी भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,खेल,देश Read More »